Arsenal oo si lama filaan ah ugu dhaqaaqday saxiixa Lautaro Martinez… (Immisa ayay ku dooneysaa saxiixiisa?) – Gool FM
(London) 28 Luulyo 2021. Naadiga Arsenal ayaa dadaallo badan ka sameyneysa suuqa xagaagan si ay u xoojiso safkeeda isla markaasna ay u sameyso saxiixyo wax ku ool ah, waxaana haatan ay si toos ah ugu dhaqaaqday weeraryahanka Inter Milan ee Lautaro Martinez.
Macallinka Arsenal ee Mikel Arteta ayaa baadi goob ugu jira weeraryahan la isku halleyn karo waxaana horay u baacsaneysey kooxdiisa xiddiga Chelsea ee Tammy Abraham balse kooxda heysata Champions League ayaa dalbatay 40 milyan oo gini.
Sidaas darteed, Arsenal ayaa raadineysa doorashooyin ka habboon iyadoo diyaar la ah inay 77 milyan oo gini ku qarash gareyso saxiixa laacibka Inter ee Martinez sida laga soo xigtay The Telegraph.
Si kastaba ha ahaatee, waxaa horraantii bishan la wariyay inay Nerazzuri aqbaleyso dalab gaaraya qiimo ahaan 77 milyan oo gini kaasoo ku aaddan xiddiga reer Argentina.
Martinez oo 19 gool dhaliyay 48 kulan oo uu ciyaaray fasalkii hore ayaa weli Inter kula jira qandaraas ay ka harsan yihiin labo sano.